मंगलवार हनुमान पुजामा के गर्ने र के नगर्ने ! -
२०७७, १३ श्रावण मंगलवार ००:०३ July 28, 2020 clickonLeaveaComment on मंगलवार हनुमान पुजामा के गर्ने र के नगर्ने !
हनुमान जी को पूजा
मंगलवारलाई मंगल ग्रहको दिन पनि मानिन्छ। यस दिन हनुमान जी को पूजा गर्दा सबै मनोकामनाएं पूर्ण हुन्छ । यसका लागि बेलुका सूर्यास्त पश्चात हनुमानजीको मंदिर या घरमा उन्को मूर्तिको अघि सफा आसनमा बसौ र तोरिको तेलको चौमुख दीपक जलाउ। यसको साथै अगरबत्ती, पुष्प आदि अर्पित गरौ। सिंदूर, चमेलीको तेल चढाउ। दीपक जलाउदा यो मंत्रको जाप गरौ
यसरी गरौ पुजा
मगलबारको पुजा गर्न बिहानै नुहाएर इसान कोण यानि उत्तर-पूर्वमा कुनै स्‍वच्‍छ स्थानमा हनुमान जि को मुर्ति स्थापना गरौ। मुर्तिको अगाडी घिउको दियो जलाई चमेलिको तेल छर्केउ र रातो या पहेलो फुलको माला चडाउ। त्यसपश्चात हनुमान चलिसाको पाठ गरेर सबैलाई प्रसाद बाडौ र भोजन दिनमा एक पटक मात्र गरौ। रातमा पुन: पुजा गरौ। हनुमान् जि लाई सिन्दुरि रङको कपडा चडाउ र दान गरौ । यो ब्रतमा गहु र गुड बाट बनेको मात्र भोजन गरौ। एक पटक मात्र र नुन को प्रयोग नगरौ। रातो बस्त्र चडाउ र धारण गरौ ।
हनुमान पुजामा बर्जित कार्य
– जो व्यक्ति मंगलवारको दिन हनुमान जी को पूजा र उनको व्रत गर्छन् उनिहरुले त्यस दिन नुनको सेवन गर्नु हुदैन ।
– जुन कुरा दान दिने हो विशेष रूपले मिठाई त्यस दिन आफुले सेवन नगरौ।
– यस दिन कालो या सेतो वस्त्र धारण गरेर हनुमान जी को पूजा न गरौ। यस्तो गर्दा पूजामा नकरात्मक प्रभाव पर्छ। हनुमान जीलाई रातो रंग प्रिय हुन्छ त्यसैले उनको पूजा रातो, या पहेलो वस्‍त्रमा नै गरौ ।
– मासुजन्य या मदिरा इत्यादिको सेवन गरेर न मन्दिर जाउ र न घरमा पूजा गरौ। यस्तो गरेमा हनुमान जी कुपित भएर भयंकर परिणामको दंड दिन सक्नुहुनेछ।
– यदि मन अशांत छ र क्रोधमा पनि छ भने पनि हनुमान जी को पूजा नगरौ।
– हनुमान जी को पूजामा चरणामृत को प्रयोग गर्नु हुदैन ।
– खंडित अथवा टुटेको मूर्ति को पूजा पनि गर्नु हुदैन ।
८ दिन देखी सत्याग्रहमा रहेको ‘इनफ इज इनफ’ले भोली देखी फेरी सडक अंदोलन गर्ने घोषणा
सूर्य देवको पूजामा यि बस्तुको प्रयोग गरे मिल्नेछ प्रसिद्धिको वरदान
२०७५, १० चैत्र आईतवार ०९:०६ March 24, 2019 clickon
सुर्य देवको जन्म कथा र पुजन बिधि
२०७६, ८ असार आईतवार ०३:१४ June 23, 2019 clickon